Messi : Muxuu Ugu Jecelyahay Noloshiisa - iftineducation.com
Laacibka adduunka iyo naadiga xilligan caalamka ugu caansan ee FC Barcelona, Loenel Messi ayaa noloshiisa gaarka ah ka waramay marka laga tago dhanka cayaaraha ee uu caanka ku yahay.
Isagoo wareysi siinayay jariirada Caras ee kasoo baxda wadankiisa Argentina waxaa uu sheegay in uu ku riyoonayo in uu noqdo Aabe.
“Mid kamida riyooyinkeyga ugu waaweyn waa in aan aabe noqdaa” ayuu yiri xidiga aduunka iyo kooxda Barcelona.
Messi, waxa ay hadda saaxibo yihiin Antonella Roccuzzo oo ah gabadha uu ugu jecelyahay oo iyadana ku nool gobalka Catalonia.
Xidigaan ayaa laweydiiyay dhibaatada uu kuqabo nolashiisa caadiga ah marka uusan kubada ciyaareyn.
Waxaa uu sheegay in uu badana waqtigiisa fasaxa ciyaaro Playstation oo uu sheegay in uu aad ujecl yahay.
Waxaa uu sheegay in uu iska yareeyay daawashada badan ee fililmada waxaana uu sidoo kale qiray in uusan wax qash qashaad ah lakulmin xiliyada uu soo dukaameysanaayo, maadaama ay ciyaaryahana asaagiis ah ee kale ay la kulmaan caqabado xilliga ay magaalada dhex damaashaadayaan.
Loenel Messi, oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay Shaqsiyaadka ugu caansan dunida, ayaa ah qof furfuran oo bulshada soo dhexgala halka xidigaha adduunka qaarkood lagu sheego isweynin iyo inaysan jecleen inay shacabka wax la wadaagaan.